व्यावहारिक मामिला | आइन्डहोभन र एम्स्टर्डम | Law & More B.V.
जब तपाइँ तपाइँको रुचिको प्रतिनिधित्वको साथ हाम्रो कानून फर्म सुम्पिदिनुहुन्छ, हामी यसलाई कार्य सम्झौतामा राख्नेछौं। यो सम्झौताले हामीले तपाईंसँग छलफल गरेका नियम र सर्तहरूको वर्णन गर्दछ। यी काम तपाईंको लागि, हाम्रो शुल्क, खर्चको प्रतिपूर्ति र हाम्रो सामान्य नियम र सर्तहरूको आवेदनसँग सम्बन्धित छ। असाइनमेन्ट सम्झौताको कार्यान्वयनमा, नेदरल्याण्ड बार एसोसिएसनको नियमहरू सहित लागू नियमहरू, ध्यानमा राखिन्छ।
जब तपाइँ तपाइँको रुचिको प्रतिनिधित्वको साथ हाम्रो कानून फर्म सुम्पिदिनुहुन्छ, हामी यसलाई कार्य सम्झौतामा राख्नेछौं। यो सम्झौताले हामीले तपाईंसँग छलफल गरेका नियम र सर्तहरूको वर्णन गर्दछ। यी काम तपाईंको लागि, हाम्रो शुल्क, खर्चको प्रतिपूर्ति र हाम्रो सामान्य नियम र सर्तहरूको आवेदनसँग सम्बन्धित छ। असाइनमेन्ट सम्झौताको कार्यान्वयनमा, नेदरल्याण्ड बार एसोसिएसनको नियमहरू लगायत लागू नियमहरू पनि ध्यानमा राखिन्छन्। तपाईंको असाइनमेन्ट वकीलसँगै तपाईं सम्पर्क गर्नुहुन्छ जसको साथ तपाईं सम्पर्कमा रहनुहुन्छ, जुन यो समझदारीमा कि यस वकिलले आफ्नो कामका केही अंशहरू आफ्नो उत्तरदायित्व र अन्य रेखदेखमा अन्य वकीलहरू, कानूनी सल्लाहकार वा सल्लाहकारहरू द्वारा गरेको हुन सक्छ। त्यसो गर्दा, वकिलले एक सक्षम र उचित अभिनय वकील को उम्मीद गर्न सकिन्छ कि एक तरीकाले कार्य गर्दछ। यस प्रक्रियाको बखत, तपाईंको वकिलले तपाईंलाई घटनाक्रम, प्रगति, र तपाईंको मामिलामा परिवर्तनहरूका बारे जानकारी दिनेछ। जबसम्म अन्यथा सहमत भएन, हामी यथासम्भव सम्भव भएसम्म मस्यौदा फाराममा तपाईंलाई पठाउन पत्राचार प्रस्तुत गर्नेछौं, अनुरोधका साथ तपाईं हामीलाई यसको सामग्रीहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ कि भनेर सूचित गर्नुहोस्।
तपाईं समय भन्दा पहिले असाइनमेन्टको सम्झौता समाप्त गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामी तपाईंलाई खर्च गरिएको घण्टाको आधारमा अन्तिम घोषणा पठाउँनेछौं। यदि एक निश्चित शुल्क सहमति भइसकेको छ र काम सुरू भएको छ भने, यो निश्चित शुल्क वा यसको केही अंश, दुर्भाग्यवस फिर्ता हुनेछैन।
यो काम कसरी वित्तीय व्यवस्था गरिने छ मा निर्भर गर्दछ। Law & More पहिल्यै कार्यभारसँग सम्बन्धित लागतहरू अनुमान गर्न वा संकेत गर्न तयार छ। यसले कहिलेकाँही निश्चित शुल्क सम्झौताको परिणाम दिन सक्छ। हामी हाम्रो ग्राहकहरूको वित्तीय स्थितिलाई ध्यानमा राख्छौं र हाम्रा ग्राहकहरूसँग सोच्नको लागि सधै इच्छुक छौं। हाम्रो कानुनी सेवाहरूको लागतहरू जुन लामो-अवधि र एक घण्टा दरमा आधारित हुन्छ, आवधिक रूपमा शुल्क लिइन्छ। हामी कामको सुरूवातमा अग्रिम भुक्तानीको लागि सोध्न सक्छौं। यो प्रारम्भिक लागतहरु लाई कभर गर्नु हो। यो अग्रिम भुक्तानी पछि समाधान हुनेछ। यदि काम गरेको घण्टा संख्या अग्रिम भुक्तानीको रकम भन्दा कम छ भने, अग्रिम भुक्तानीको अप्रयुक्त हिस्सा फिर्ता हुनेछ। तपाईले जहिले पनि घण्टा बिताएको र काम गरेको स्पष्ट विवरण पाउनुहुनेछ। तपाइँ जहिले पनि तपाइँको वकिललाई स्पष्टीकरणको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। सहमति गरिएको प्रति घण्टा शुल्क कार्य पुष्टिकरणमा वर्णन गरिएको छ। अन्यथा सहमत नभएसम्म, उल्लेखित मात्रा VAT को बाहेक। तपाईले अदालत रेजिस्ट्री फीस, बेलिफ शुल्क, अंशहरू, यात्रा र आवास खर्च र ढुवानी लागत जस्ता लागतहरू पनि तिर्नुपर्नेछ। यी तथाकथित-आउट-को-पकेट खर्चहरू तपाईंलाई छुट्टै शुल्क लगाइनेछ। एक बर्ष भन्दा लामो समयका मामिलाहरूमा, सहमति दर वार्षिक तवरले अनुक्रमणिका प्रतिशतको साथ समायोजित गर्न सकिन्छ।
हामी तपाईंलाई इनभ्वाइस मिति को १ days दिन भित्र तपाईंको वकिलको बिल तिर्न भन्छौं। यदि भुक्तानी समयमै गरिएको छैन भने, हामी अधिकार (अस्थायी रूपमा) काम निलम्बन गर्न हकदार छौं। यदि तपाईं सेट अवधि भित्र इनभ्वाइस भुक्तान गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। यदि यसको लागि पर्याप्त कारण छ भने, वकिलको विवेकमा थप व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यी लिखित रूपमा रेकर्ड गरिनेछ।
Law & More कानूनी सहायता बोर्डको साथ सम्बद्ध छैन। त्यसकारण Law & More अनुदान प्राप्त कानूनी सहायता प्रदान गर्दैन। यदि तपाईं अनुदान प्राप्त कानूनी सहायता प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने ("थप"), हामी तपाईंलाई अर्को कानून फर्मलाई सम्पर्क गर्न सिफारिस गर्दछौं।
नेदरल्याण्ड्समा रहेको कानून फर्म र कर परामर्शको रूपमा हाम्रो कार्यमा हामी डच र यूरोपीयन एन्टी मनी लान्ड्रिंग र फ्रड कानून (डब्ल्यूडब्ल्यूएफटी) का पालना गर्न बाध्य छौं, जसमा हामी हाम्रो ग्राहकको पहिचानको स्पष्ट प्रमाण प्राप्त गर्न बाध्यता आवश्यक छ, हामी सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछौं र सम्झौता सम्बन्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले। त्यसकारण, वाणिज्य च्याम्बरबाट एउटा निकाल्ने र / वा एक प्रतिलिपि प्रमाणिकरण वा परिचयको मान्य प्रमाण यस सन्दर्भमा अनुरोध गर्न सकिन्छ। तपाईं यस बारेमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ KYC दायित्व.
हाम्रा सामान्य नियम र सर्तहरू हाम्रो सेवाहरूमा लागू हुन्छन्। यी सामान्य सर्तहरू र कोडिशन्स तपाईंलाई असाइनमेन्ट सम्झौताको साथ पठाइनेछ। तपाईं पनि तिनीहरूलाई पाउन सक्नुहुन्छ सामान्य शर्तहरू.
गुनासोहरूको लागि प्रक्रिया
हामी हाम्रो ग्राहकहरूको सन्तुष्टिमा ठूलो महत्त्व राख्छौं। हाम्रो फर्मले तपाईंलाई सब भन्दा राम्रो सेवा प्रदान गर्न यसको शक्तिमा सबै गर्छ। यद्यपि तपाईं हाम्रो सेवाहरूको कुनै खास पक्षबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई तपाईंलाई जतिसक्दो चाँडो बताउन दिनुहोस् र तपाईंको वकीलसँग छलफल गर्न आग्रह गर्नुहोस्। तपाईंसँग परामर्श गरेर हामी यो समस्याको समाधान फेला पार्न प्रयास गर्नेछौं जुन खडा भएको छ। हामी तपाईलाई यो समाधान लिखित रूपमा सँधै पुष्टि गर्नेछौं। यदि सँगै समाधान गर्न सम्भव छैन भने, हाम्रो अफिसमा अफिसको गुनासो प्रक्रिया पनि छ। तपाइँ यस प्रक्रियाको बारेमा मा पाउन सक्नुहुन्छ कार्यालय उजूरी प्रक्रिया.